Madaxweyne Guudlaawe oo la kulmay Xildhibaannada ka soo jeeda Beesha Xawaadle -
Russians living abroad travel to Moscow to get Sputnik V Covid-19…
Hundreds of schoolgirls are missing in northwestern Nigeria after kidnapping
Home News Madaxweyne Guudlaawe oo la kulmay Xildhibaannada ka soo jeeda Beesha Xawaadle
Madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa xalay kula kulmay magaalada Muqdisho qaar ka mid ah Xildhibaannada Baarlamaanka ee laga soo doorto Gobolka Hiiraan.
Madaxweyne Guudlaawe ayaa xubnaha uu la kulmay ay isugu jireen Senataro iyo Xildhibaano ka kala tirsan labada Aqal, waxaana ay ka wada hadleen xaalada deegaanada Hirshabelle, siyaasadda, dib u heshiisiin iyo amniga.
Xildhibaannada iyo senataradan ayaa ahaa kuwa ka soo jeeda Beesha Xawaadle, waxaana kulankan bilow u ahaa kulamo Madaxweyne Guudlaawe la qaadanayo xildhibaannada, waxgaradka, siyaasiyiinta iyo bulshada ka soo jeeda Gobolka Hiiraan.
Ilo ku dhow dhow kulanka ayaa sheegaya in labada dhinac iskula soo qaadeen arrinta Gobolka Hiiraan iyo sidii loo dhameyn lahaa tabashooyinka jira, waxaana la isla gartay in laga wada shaqeeyo amniga, dib u heshiisiinta iyo horumarka deegaanka.
Bannaan baxyo dhowaan ka dhacay Beledweyne ayaa looga soo horjeeday qaabkii loo maray dhismaha labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle.
Previous articleDuqeyn lagu burburiyay xaruntii Idaacada Andalus ee Al-Shabaab
Next articleGuddoomiye Kuxigeenkii deegaanka Garasbaaley oo lagu dilay qarax miino
Golaha Ammaanka oo ansixiyay in waqtiga loo kordhiyo Ciidamada AMISOM ee dalka Soomaaliya